Vaovao 1 manome valisoa | The Reward Foundation: Fitiavana, firaisana ara-nofo ary ny Internet
Home Tsia. Vaovao mahafaly 1
Betsaka ny zava-mitranga ao amin'ny The Reward Foundation, noho izany dia nanapa-kevitra ny handefa ny 'Rewarding News' izahay ho toy ny famoahana vaovao izay hiseho enina isan-taona fa tsy isaky ny telovolana. Mibitsika isan'andro izahay araka izay tratra ary manao tatitra vaovao isan-kerinandro ihany koa. Raha misy zavatra tianao ho hitanay manafina anay dia lazao fotsiny. Tongasoa eto amin'i Mary Sharpe ny hevitra rehetra mary@rewardfoundation.org.
Tahiry Lottery lehibe
“Apple, Google, Facebook? Mpivarotra zava-mahadomelina tokoa izy ireo ”
Resadresaka amin'ny horonantsary
Fangorahana tena: Famerenana ny boky
Ela be, veloma…
Fifandraisana eo amin'ny pôrnô sy ny fanirery
Sary vetaveta ao anatin'ny fifandraisana
Taratasy fanabeazana sy fahaiza-manao momba ny Parlemanta ao Skotika momba ny PSHE
VAOVAO, Fijery ary fanadinadinana
Ny Foundation Reward dia faly nanambara fa nahazo loka avy amin'ny Fampiasam-bola amin'ny hevitra renirano an'ny Big Lottery Fund. Ny tetikasanay dia manana ny lohateny hoe "inona-dia-milaza-ny-tin-tin" Fampiakarana ny fahatsiarovan-tena amin'ny voka-dratsin'ny pôrnôgrafia amin'ireo tanora any Ekosy. Ny tanjona dia ny hampiroborobo ny drafitry ny lesona ho an'ny sekoly ao anatin'ny programa momba ny fanabeazana momba ny fahasalamana manokana sy ara-tsosialy (PSHE).
Hifantoka amin'ny fahafahan'ny pôrnôgrafia manentana be loatra ny ati-doha isika miaraka amin'ny fiatraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, fahazoana, fifandraisana ary heloka bevava. Hanoratra fomba iray ihany koa izahay hialana amin'ny pôrnôgrafia ary hananganana faharetana. Faly izahay fa manana talenta mpampianatra sy mpianatra vitsivitsy eo an-tanana hanampy anay amin'ny famolavolana fitaovana mahafinaritra, mifanerasera ary mifanaraka amin'ny taona.
Vakio ity tsara lahatsoratra momba ny fomba fanodikodinan'ny Facebook ara-bakiteny ny atidohanao. Ireo mpitsikera teknolojia dia miantso ny fomba hanararaotan'ireo zazalahy lehibe ny fahalementsika ara-pihetseham-po hisamborana antsika sy hitazomana antsika hiverina. Manome miliara izy ireo ary isika, indrindra ireo tanora adolantsento, dia mety ho kivy, mitebiteby ary tsy afa-po amin'ny fiainana.
Izahay dia sahirana tamin'ny portfolio an'ny resadresaka an-tsary. Nanao zava-baovao tamin'ny mpilalao tanora Robbie Gordon avy any Scottish izahay Wonder Woolsorinasa teatra ary miaraka amin'i Christian McNeill, mpanazatra mahatohitra aingam-panahy avy any Ireo singa amin'ny fantsakana. Nanomboka ny dingana miadana amin'ny fianarana ny fanovana ireo horonan-tsary ihany koa izahay. Ny drafitray dia ny hanao ny sasany amin'ireto dinidinika ireto ao amin'ny tranokala afaka herinandro vitsivitsy. Hisioka izahay rehefa any amin'ny Internet izy ireo.
Tianay ny manolotra boky tsara antsoina Fangoraham-po - Atsaharo ny fikapohan-tenanao ary avelao ny tsy fandriam-pahalemana avy amin'ny profesora momba ny fampandrosoana ny olombelona Kristin Neff. Reny Kristen miresaka momba ny bokiny tamin'ny fihaonambe tamin'ny taon-dasa ary talanjona izahay. Tsy maintsy nandresy ny tena olana sasany tamin'ny fiainany izy, noho izany dia tsy teôria fotsiny. Ny boky dia manolotra vahaolana matanjaka hiadiana amin'ny fahaketrahana, ny tebiteby ary ny fitsikerana tena izay tonga amin'ny fiainana ao anaty kolontsaina tery sy mifaninana. Misy fanazaran-tena efa voazaha toetra sy fanadinana feo azo alaina maimaimpoana koa. Boky mahasarika sy mahasoa izy io.
Ela be, veloma...
Ny TRF dia nanao veloma an'i Jamie Wright sy David Martin, ireo mpianatra roa napetraka tao amin'ny Oniversite Napier tamin'ity taona ity. Izy ireo dia nanampy anay tamin'ny fampandrosoana ny tranokalanay ary antenainay fa nahazo traikefa asa mahasoa ho azy ireo izany. Mirary soa ho azy ireo amin'ny dingana manaraka amin'ny asany.
INONA NO LAZAIN'NY BOFFINS momba…
Misy izao porofo fa ny kapoka ataon'ny mpiara-miasa dia mahafinaritra kokoa noho ny mikoty olon-kafa na ianao. Ny fikorohana dia mampihena ny fitempon'ny fony. Ity dia zavatra tokony hodinihin'ny NHS ho toy ny fanoloana ny vidiny lafo sy ny voka-dratsin'ny zava-mahadomelina. Mifandray tsara amin'izay fantatsika momba ny fitondran-tena mifamatotra. jereo Eto ho an'ny lahatsoratra mahavariana antsoina hoe "The Lazy Way to Stay in Love" izay milaza bebe kokoa momba ny majika amin'ny fitondran-tena mifamatotra.
Iza no voalohany, ny vetaveta sa ny manirery? Amin'ity fikarohana ireo izay nijery sary vetaveta dia mety hahatsapa ho manirery, ary ireo izay niaina manirery dia azo inoana fa hijery sary vetaveta. Ireo fikarohana ireo dia mifanaraka amin'ny fikarohana mampifandray ny fampiasana sary vetaveta amin'ny fiatraikany / fientanam-po.
Inona no vokatry ny pôrnôgrafia amin'ny mpivady? Ireto misy sombintsombiny avy amin'ny an fandalinana vaovao manan-danja notarihin'i Paul J. Wright:
"Ny fialana sary vetaveta amin'ny fientanam-po amin'ny firaisana ara-nofo sy ny fanaovana tsinontsinona ny fifandraisana ara-nofo dia samy mifandray amin'ny tsy fahafaham-po amin'ny firaisana."
"Arakaraky ny ampiasana sary vetaveta matetika no ampiasaina amin'ny fitaovam-pihetseham-po amin'ny filokana, dia arakaraka ny maha-voafintina ny filan'ny nofo amin'ny pôrnôgrafia izay mifanohitra amin'ny loharanom-pananahana hafa."
“Hitanay fa arakaraka ny tsy maha-sarobidy ny fifandraisana amin'ny lahy sy ny vavy no maha kely ny fahafaham-po ara-nofo izay notaterin'izy ireo.”
Tamin'ny volana aprily 2017, ny lalàna vaovao momba ny pôrnôgrafia ao Skotlandia dia nanjary teo ambanin'ny Fihetsika mamoa fady sy fanararaotana ara-nofo 2016. Ny sazy farany ambony noho ny fanambarana na fandrahonana hamoaka sary na horonantsary akaiky anao dia fanagadrana 5 taona. Ilay fahotana dia misy ny sary nalaina tany amin'ny toerana tsy misy olona miboridana, na manao atin'akanjo fotsiny na mampiseho olona manao firaisana. Hamaky bebe kokoa Eto.
Ny komitin'ny fanabeazam-pirenena sy ny fahaizan'ny parlemanta Scottish dia namoaka ny tatitra momba ny fanabeazana momba ny firaisana sy ny firaisana. Nilaza ny mpianatra fa tian'izy ireo hihoatra ny biolojia ny lesona ary hiresaka bebe kokoa momba ny fifandraisana. Ny Foundation Reward dia vonona handray anjara amin'ny vahaolana. Ny loka avy amin'ny The Big Lottery Fund dia hanampy antsika hahatratra izany. (Jereo etsy ambony) Azo jerena ny antsipiriany misimisy momba ny taratasin'ny komity Eto.
Nahazo ity mailaka ity ianao satria nisafidy tao amin'ny tranonkalanay www.rewardfoundation.org.
Ny adiresy mailaka dia: